Maawa gumi nemasere ndiko kuzvimiririra kweApple Watch Series 18 | Ndinobva mac
Kuvhurwa kweApple Watch Series 1 uye 2, kwakamiririra shanduko yakakosha mukuzvimirira kwemidziyo iyi, kubva pazuva rimwe kusvika kune maviri ayo Series 2 yaakatipa, chero bedzi tisina kushandisa zvakanyanya GPS uye chero chiitiko chemuviri. Asi nekuvhurwa kweiyo Series 3, kunyanya iyo modhi ine kubatana kweLTE, kuzvionera kwakadzikiswazve kune izvo iyo Yekutanga Apple Watch yatakatipa: maawa gumi nemasere. Nekudaro, iyo modhi isina kubatana kwedata, inoenderera ichitipa mazuva maviri ekuzvimiririra senge yakatangira, Series 18, modhi yakabviswa pamusika.
Asi awa maawa gumi nemasere anogona kudzikiswa zvakanyanya kana tikashandisa GPS nekufona zvinoenderana naApple nekuzvimiririra kweChitatu 18 tinogona: tarisa makumi mapfumbamwe kana tine chero ziviso, shandisa zvinoshandiswa kwemaminetsi makumi mashanu nemashanu, ita kurovedzwa kwemaminetsi makumi matatu uchiteerera kumimhanzi. Izvo zvinotibvumidzawo isu kuti tifonere kweawa kubva kuchinhu pachacho kana maawa matatu kana tichizviita kuburikidza ne iPhone yedu. Kunyangwe Apple isina kuitsanangura, zvinofungidzirwa kuti chiputi cheLTE muApple Watch chinobva chadzima pachayo kana ichibatanidzwa neiyo iPhone, kuitira kuti iwedzere hupenyu hwebhatiri uye isingagamuchire notisi uye kufona pazvinhu zvese izvi.
Iyo Series 3 inotibvumidza isu kuti tiite zvekurovedza muviri kwemaawa gumi. Asi kana isu tikamhanya neiyo GPS yakaitwa, kuzvionera kunoderedzwa kusvika maawa makumi matatu. Iyo nguva yekuchaja 80% yeApple Watch Series 3 bhatiri iawa nehafu nechaja yekutanga, asi kana tichida kuti izare tinofanirwa kumirira maawa maviri. Iyo modhi ine LTE yekubatanidza parizvino haiwanikwi kuti ichengetedzwe muSpain, iyo inogona kuratidza kuti ndivo vanoshanda ivo pachavo vanofanirwa kupa mhinduro yekubatanidza kune mushandisi. MuUnited States, vanoshanda vari kupa imwe yekuwedzera data chirongwa cheiyo chaiyo modhi iyo inotengwa pamadhora gumi pamwedzi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Maawa gumi nemasere ndiko kuzvimiririra kweApple Watch Series 18
Iyo yakanakisa "maoko-on" yeiyo iPhone X yatakaona mushure mekuratidzwa kwayo